10-kan Dabeecadood Waa Qasab In Caruurta La Baro | Maan Kaab
Home Hormarinta Nafta 10-kan dabeecadood waa qasab in caruurta la baro
10-kan dabeecadood waa qasab in caruurta la baro
aadaabta wanaagsan waa bilowga guusha ubadka.
Xilli hore kuma noqoneyso in carruurta ay bartaan dhaqamada iyo edebta iyo sida dadka loo xushmeeyo. Caruurta inta ay yaryihiin waxay leeyihiin maskax wanaagsan oo wax xifdin kara.
Aadaabta iyo anshaxa caruurta waxay muujinayaan in si wanaagsan loo soo koriyay. In kastoo howl adag ay tahay in carruurta la baro aadaabta, haddaba xaqiiji in aadan xanaaqin oo dulqaadka uusan kaa dhammaanin.
Caruurta adiga ayey wax kaa baranayaan, haddaba u noqo tusaale wanaagsan. Waalidiinta waxaa looga baahan yahay in iyaga ay edebta la yimaadaan marka carruurta ay hor taagan yihiin, way daawanayaan, wayna idiinka baranayaan.
Caruurta aadaabta wanaagsan leh, markasta way ka horreeyaan kuwa kale – waxbarasho ahaan iyo fikirka bulshada dhexdeeda, labadaba.
Halkan ka akhriso qaababka ay carruurta uga faa’ideystaan aadaabta wanaagsan:
Waxay xoojineysaa kalsoonidooda
In si wanaagsan loo soo edbiyo, ayna la kulmaan wax wanaagsan oo saameyn ku leh noloshooda, waxay carruurta ka caawineysaa marka ay koraan oo dadka ay soo dhexgalaan, in ay noqdaan kuwa isku kalsoon.
In caruurta ay arkaan in lagu xushmeynayo aadaabtooda, iyagana ay dadka kale xushmeeyaan, waxay ka dhigeysaa kuwo si wanaagsan isugu kalsoon.
Nolosha bulshada dhexdeeda
Dadka dabeecadda xun ee xaasidiinta ah, waxay badanaa la saaxiibaan kuwa khalafsan oo dadka ugu xun, halka caruurta edebta leh ay helaan saaxiibo wanaagsan oo naxariis badan, oo dadka xushmeeya.
Waxay fursad u helayaan in ay soo jiitaan dad badan oo daacad ah oo edeb leh – khiyaanana aanan aqoonin. Aadaabta wanaagsan waxay keenaan xiriir xoog badan oo wanaagsan.
Caruurta dabeecadaha wanaagsan leh way ka fursado badan yihiin kuwa kale, waan kuwa muuqda, aqoon ahaan, shaqo ahaan iyo bulsho ahaanba.
Dadka edebta leh waxay u badan tahay in shaqooyiin wanaagsan ay helaan, ayna si degdeg ah u sii hormaraan.
In aa dhal arrin oo wanaagsan sameyso, ama aad aragto hal jawaab oo wanaagsan, waxay ka dhigeysaa qof faraxsan – haddii uu qofkaas yahay mid edeb badan oo dabeecad wanaagsan wuxuu noqonayaa mid ku qanca arrintaas.
Waana suuragal in arrintaas ay qofka kale ka dhigto mid wanaagsan, uuna ka barto dabeecad suuban. Edebta waxay carruurta u tahay farxad – inta ay yaryihiin iyo marka ay waynaadaan.
Haddaba carruurtaada bar aadaabtan:
In ay dhahaan “fadlan” iyo “mahadsanid”
Tani waa mid ka mid ah aadaabta ugu horreeya ee carruurta la baro. Waa muhiim in ay adeegsadaan “fadlan” marka qof ay wax waydiisanayaan, iyo in ay “mahadsanid” dhahaan marka uu qof wax u sameeyo ama siiyo.
Arrintan ha noqoto mid ay si maalinle ah u adeegsadaan illaa carabkooda iyo maskaxdooda ay ka bartaan.
In ay wax waydiistaan ka hor inta aysan iska qaadanin
Caruurta waa in ay bartaan in fasax ay u qaataan ka hor inta aysan iska qaadanin wax aysan iyaga lahayn – xitaa haddii hooyo iyo aabe leeyihiin waxaas.
Waana in la baro in ay soo celiyaan wixii ay qof ka qaataan, una mahadceliyaan qofkaas.
In ay dhahaan “waan ka xumahay”
‘Fadlan’ iyo ‘mahadsanid’ waxaa wehliya ‘waan ka xumahay’, waa marka ay wax khaldan sameeyaan – arrintan waa dabeecad wanaagsan ee ma ahan daciifnimo.
Caruurtaada bar xilliga iyo meesha ay ‘waan ka xumahay’ u adeegsan karaa, waana in aysan iska noqonin erey ay markasta adeegsadaan.
Albaabada in ay garaacaan ka hor inta aysan galin
Caruurta waa in la baro in asturnaanta iyo waxyaabaha gaarka ah ay yihiin muhiim aan laga gudbi Karin, si gaar ah guryaha. Waa in ay ogaadaan in ay xushmad tahay in albaabka ay soo karaacaan ka hor inta aysan iska soo galin iyagoo aan la fasixin.
In adiga aad sidaa sameyso waxay carruurta ka caawineysaa in ay bartaan dabeecaddaas oo ay la qabsadaan.
In sanka iyo afka la daboolo marka la qufacayo ama hindhisoonayo
Caruurtaad bar in afka iyo sanka ay gacanta ama maro ku dabooshaan marka ay qufacayaan ama hindhisoonayaan.
Sidoo kale bar in sanka oo farta la geliyo iyadoo goob dadwaynaha ka dhexeysa la joogo, in ay tahay edeb daro iyo wax aan lagu farxin. Taasi waa edebta iyo nadaafadda – labadaba.
In aan dadka lagu qoslin
Arrintan waa in la baro inta ay aadka u yaryihiin – Waa in carruurta ay ogaadaan in wax xun ay tahay in dadka lagu qoslo ama lagu shactireysto.
Waa in la baraa in aysan marnaba wanaagsanayn in qof laga dhaawaco qalbiga iyo dareenka, iyadoo lagu qoslayo ama lagu maadeysanayo – Sidoo kale arrintaas waa xadgudub iyo cabsi gelin – ha ahaato mid qarsoon ama mid muuqata.
In dadka waaweyn la xushmeeyo
Dadka waaweyn waxay dunida ku soo noolaayeen muddo, waana in caruurta la baro in khibraddooda ay tahay arrin xikmad ah, ayna muhiim tahay in la xushmeeyo.
Waa in sidoo kale la baro in ay xushmeeyaan waalidiinta, waalidiintooda, macallimiinta, iyo qof kasta oo ka wayne ee aad la kulanto.
Sidoo kale, dadka waaweynna waa in ay carruurta xushmeeyaan, u naxariistaan ayna uga sheekeeyaan khibradaha wanaagsan ee kobcinaya maskaxda caruurta. Taas waxay ka caawineysaa in ay ogaadaan sababta loo xushmeynayo dadka waawayn.
8. Weligood in aysan adeegsanin ereyada xun
Luqadda xun iyo adeegsiga ereyada qalafsan waa xushmad darro iyo wax aan lagu farxin. Caruurta waa in la baro in aysan weligood adeegsanin ereyo xun, xitaa haddii ay ka maqlaan telefishinka ama carruurta iskluulka.
Waa dabeecad aasaasi ah in carruurta la baro arrintaas. La fadhiiso, una sharax sababta aysan u wanaagsanayn adeegsiga ereyada xun.
Akhriso: 10 caado oo dadka faqiirka ah sameeyan
In dadka aan farta ama indhaha lagu taagin
Waa in caruurta la baro in farta ama indhaha oo dadka lagu taago ay yihiin anshax xumo iyo axmaqnimo. U sheeg in marna aysan fiicnayn in faraha la taagtaago.
Taas waxay sidoo kale kaa caawineysaa in aad barto dareenka dadka kale iyo qof kasta in uu leeyahay dabeecado gaar u ah. Waxaan weydiisaa sida ay dareemi lahaayeen haddii qof uu farta ku soo taago ama indhaha six un ugu soo eego.
10.In ay u naxariistaa dadka naafada ah
Caruurta waxay jecel yihiin in ay ogaadaan wax kasta, haddaba marka ay arkan qof naafo ah, u sheeg in aysan eegin ama farta ku taagin. Waxaadna bartaa in wadada ay uga leexdaan ama fadhiga uga kacaan.
U sheeg in qofka naafada ah uu la mid yahay dadka kale, balse keliya uga duwan yahay meesha uu qofkaas naafada ka yahay. Waana in aad bartaa in si xushmad leh oo la siman dadka kale loola dhaqmo.
Previous article5 qof allah uma dambi dhaafo
Next article7 Qaab Online Lacag Kaga Samee
Ugaara Dadka Khuuriyo Markay Hurdan
7 Dhibaato Oo Laga Dhaxlo Dhafarka Badan
Maxay tahay sababta ay dumarku uga hor duqoobaan ragga?
Copyright © 2016-2021 Maan Kaab All rights reserved.